Asmaroom Laggasaa: “Oromoon sirna Gadaan mootummaa ofiin of bulchu hundeeffachuu danda’a” – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAsmaroom Laggasaa: “Oromoon sirna Gadaan mootummaa ofiin of bulchu hundeeffachuu danda’a”
(bbc)—Hayyuun aantiroopolojii lammii Eertiraa piroofeesar Asmaroom Laggasaa waggoota 45 oliif sirna Gadaa qorataniiru. Qorannoo isaanii kanas kitaabota lamaan maxxansiisanii Sirna Gadaa addunyaa waliin wal barsiisanii jiru.
Kitaabni sadaffaan pirofeesar Asmaroom barreessan kan yaadannoon isaa qeerroo fi dhaloota qubeetiif tahe maxxansaaf gara Chaayinaatti akka ergameefi ji’a tokkoon duubatti karaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatiin dubbistoota bira gaha jedhan hayyuun kun.
Pirofeesar Asmaroom: Dhaladhee kanin guddadhe Eeertiraa Asmaraatti. Kanin baradhes achuma mana barumsaa ‘evangelical church’ jedhamutti.
Kanas ta’ee hanga kutaa 6ffaa qofatu Asmaraa jira waan ta’eef barattoonni Kiristaanaa gara Finfinneetti cehu, warri Islaama tahan ammo gara Kaartumii fi Kaayirootti deemu. Ani gara Finfineettin dhufe.
Ingiliiz maatii kiyya garee yuniyeenistii Eertiraa fi Itoophiyaa deeggartu jechuun biyyaa ari’an. Maatiin kiyyas gara Itoophiyaatti godaanan.
Qorannoo milkaa’ina qabus qoradhee ittiin milkaa’eera.
Kanaaf waa’ee uummata Oromoo Onesmoosii fi hiriyoonnisaa akaakilee kiyya kanatti waan baayyee himaa turan.
Goodayyaa suuraa “Oromoon sirna Gadaan mootummaa ofiin of bulchu hundeefachuu ni danda’a”
Bakka biraa garuu bakkan barbaade deemee akkan qorachuu danda’u naaf heeyyaman. Achii gara Ameerikaattin deebi’e.
Mana kitaabaa tokko seeneen cinqamee kitaabota waa’ee Afrikaa barreeffaman osoon barbaaduu dubartiin mana kitaabichaa hojjettu na argitee ‘ati Itoophiyaarraayii kan dhufte?’ jettee nagaafatte.
‘Dhihootti kitaaba tokko waa’ee Itoophiyaa irratti kan maxxansiisne qabna siif haa kennuu?’ jettee nagaafatte.
Tole jennaan kitaaba hayyuu Xaaliyaaniin barraa’e kan dhimma Oromoo irratti xiyyeefate naaf kennite.
Kitaabicha wayitan fuudhee dubbisu garmalee hawwataa ta’een argadhe. Gama tokkoon afaan Oromootiin gama kaaninimmoo Afaan Ingliffaan barreefame.
Haala kanaanin waa’ee sirna Gadaa qorachuu eegale.
Waggoota lamaaf karaa Itoophiyaatin Boorana keessa taa’een qoradhe. Sana booda mootummaan Dargii aangoo waan qabateef deebi’uu hin dandeenye.
Pirofeesar Asmaroom: Biyyooti baha Afrikaa baayyeen gurmaa’insa gulantaa umriin ijaarame qabu. Garuu sirna hawaasummaaf malee sirna siyaasaaf hin fayyadaman.
Sabni Oromoo garuu Gurmaa’insa umurii kana fudhatanii gara sirna siyaasaa guutuu ta’eetti jijjiiranii itti fayyadamu.
Kanaaf Oromoo biratti “aangoon umrii guutuuf” wanti jedhamu hin jiru.
Warri guyya lakkaa’an waan jiraniif guyyaa sanatti bakka itti baallii walii dabarsanitti gareen lamaanuu ni argama.
Guyyaa aangoon itti darbu baruuf jecha Booranni dhaha Astiroonomii kan urjiin torbaa fi addeessi waliin bahan guyyaa fi ji’asaa tolchanii beeku.
Ilaaluudhaan qofa jechuudha. Animmoo dhaha isaanii kana qoradheen kaalandarri Booranni fayyadamu kuni mala saayinsawaa isa guddaa ta’uu addunyaan akka hubattu gochuu danda’eera.
BBC: Sirni Gadaa sirna bulchiinsa ammayyaa ta’uu danda’aa?
Pirofeesar Asmaroom: Sirritti hojjechuu danda’a. Kitaaba kiyya haaraa dhihootti bahuratti bal’inaan qopheesseera.
Hanga har’aatti sirnuma Gadaa beeksisuudha malee gara fuulduraatti akkamitti fooyyeesinee itti fayadamna kan jedhu hin barreesine ture.
Kitaabni haaraan kuni garuu ‘Oromoon Itoophiyaa keessatti jaarraa 21ffaa kana keessa sirna Gadaatti fayyadamee akkamittiin mootummaa isaa ripabiliika dimookiraatawaa ta’e hundeeffachuu danda’a kan jedhu bal’inaan barreesseera.
Itoophiyaa keessatti Oromoon qofaa isaatti mootummaa ofiin of bulchu hundeefachuu ni danda’a.
Ani karoora mijataa ta’e kan sirna Gadaatiin deggarame qopheesseera.
Hayyoonni Oromoo irratti mari’atanii, wal-falmanii, fooyyessanii hojiirra oolchuu ni danda’u.
Pirofeesar Asmaroom: Wanti lama fooyya’uu qaba. Tokkoffaan hirmaannaan dubartootaa fooyya’uu qaba. Isaan bal’inaan keessatti hirmaachuu qabu.
Lammaffaan sirnichi gulantaa umuriitiin osoo hin taane dhalootaan deema, dhalootaan yoo ta’e sanyiin nama tokkoo dhaloota sadiirra yoo gahu ijoolleessaa faana garaagarummaa umurii bal’aatu uumama.
Hanga wagga 50 gahuu danda’a jechuudha. Kanaaf gulantaa tokko keessa yeroo jiran garaagarummaa umuriitu jira jechuudha. Booranni hanqina kana ‘Hiriyaa’ dhaan guuta.
BBC: Waa’ee ummata Booranaa maal bartan?
Pirofeesar Asmaroom: Booranni uummata jaalalaati. Sijaallannaan siif du’a gaafa sijibbes hammasuma. Isaan biratti sobuun aadmaleedha.
‘Lafaa kaatee ‘diina hammanan ajjeese, leencan ajjeese…’ jennaan dhugummaansaa ni qulqullaa’a. Hannis hin jiru.
Boorana keessatti wal ajjeesuun hin jiru. Booranni Boorana tasuma hin ajjeesu. Akkas ta’ee argamnaan sirna ‘muuda mudaa muddii”tin addabbiinsaa hammaataadha.
Afaan Oromoo fi Amaaraa akka gaariitti danda’a waan ani jedhe hunda hiikee itti naaf hima.
Pirofeesar Asmaroom Laggasaa yeroo gabaabaatti gara Itoophiyaa deebi’anii akka dhufaniifi yuunivarsiitiiwwan gara garaa keessatti dhaloota haaraa waa’ee sirna Gadaa barsiisuu karoora akka qaban BBC’tti himaniiru.
OBN ታህሳስ 11፣2011 የኦሮሞን ህዝብ ታሪክ ፣ስልጣኔና ወግ እንዲሁም ታሪካዊ እና ጥንታዊውን የገዳ ስርዓትን ለአለም ካስተዋወቁ ፕሮፌሰር አስመሮም ለገሰ ጋር የተደረቀ ቆይታ ክፍል ሁለት